မည်သည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်နှင့်သင်၏ထည့်သွင်းတစ်ခုလုံးကိုကုန်ကျစရိတ်ပါဝင်သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏အစိုးရရုံးသို့ပေးဆောင်စရိတ်, လိုင်စင်ဌာနခွဲ, လိုက်နာမှုဌာနခွဲ, ပြဌာန်းချက်စည်းမျဉ်းအေဂျင်စီနှင့်အခြားသူများရှိပါတယ် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ။ အချို့ကိစ္စများတွင်သက်သေခံရှေ့နေ, ဆက်သားနှင့်သေးငယ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေထည့်သွင်း၏ကုန်ကျစရိတ်တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ သင့်ကုမ္ပဏီထည့်သွင်း၏ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးသည်အစုအစည်းတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
နေးဗစ်ခိုင်ခံ့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထုံးအဖွဲ့တို့အဖြစ်ရိုးရှင်းများနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုကြောင့်တစ်ဦးလူကြိုက်များတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ဖွဲ့စည်းခြင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုအကြားကုန်ကျနိုင်ပါတယ် နေးဗစ်အတွက် $ 1685 နှင့် $ 17,000 တရုတ်၌သင်တို့ကိုထည့်သွင်းထားပါသည်နှင့်စီးပွားရေးတည်ဆောက်ပုံ (များ) ၏အဘယ်အရာကို type ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့လျက်ရှိသည်ဘယ်မှာပေါ် မူတည်. ။ ဤအရာအားလုံးသည်အစိုးရပုံစံတင်ပို့ရန်အခကြေးငွေနှင့်ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြင်းနှင့်သင်ကမ်းလွန်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ငွေပေးသောအခါအပေါငျးတို့သတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည် "အထုပ်" ကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းများဖြစ်ကြသည်။
OffshoreCompany.com နိုင်ငံခြားအစိုးရအရာရှိများနှင့်ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးရှိပြီးကျနော်တို့ဦးစားပေးပုံစံတင်ပို့ရန်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်များအတွက်အစိုးရရုံးရန်သင့်ပြင်ဆင်ထားဆောင်းပါးများကိုကယ်နှုတ်တော်မူလက်။ ကျနော်တို့အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်ပုံစံတင်ပို့ရန်ဝန်ဆောင်မှုသေချာနှင့်မျှမကိစ္စကိုသင်ထည့်သွင်းဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အတွက်အဘယ်အရာကိုတိုင်းပြည်, လမ်း၏တစ်ဦးချင်းစီခြေလှမ်းဆွဲသွင်းပါဝင်သင့်ရဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးများအတွက်အလုပ်လုပ်သူကိုပညာရှင်များ employ ။
ဤအရာအားလုံးသည်ဖော်ပြထားသောတရားစီရင်မှုအတွက်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ထည့်သွင်းဖို့ပြည့်စုံအထုပ်ကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့အစိုးရနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေ, အဖြစ် OffshoreCompany.com ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေများပါဝင်သည်။ စျေးနှုန်းများပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
British Virgin Islands $1545.00
တရုတ် (ပိုင်ဆိုင်လုံးလုံးနိုင်ငံခြားရေးလုပ်ငန်း LLC) $8400.00
ကွတ်ကျွန်းစုများပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှ $12,995.00
ကင်းလွတ်က Man ၏ကျွန်း $4810.00
က Man LLC ၏ကျွန်း $4035.00
က Man ဌာနေ၏ကျွန်း $2485.00
က Man Trust ၏ကျွန်း $3425.00
လူဇင်ဘတ် Holding $12,940.00
လူဇင်ဘတ် SOPARFI $13,090.00
မောရစ်ရှ GBC ငါ $6070.00
မောရစ်ရှ GBC II ကို $2685.00
နေးဗစ် LLC $1685.00
Puerto Rico $995.00
ရုရှား LLC $3835.00
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း LLP $1155.00
အမေရိကန် Virgin Islands $1245.00
အမေရိကန် Virgin Islands LLC $1595.00
အစိုးရနှင့်အေးဂျင့်ကြေး flux ၏ပြည်နယ်အတွက်ကြောင့်အထက်ပါဝန်ဆောင်ခထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်နေ့၌စျေးနှုန်းများသူတို့ယနေ့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကှာခွားစခွေငျးငှါစိတ်ကိုထားပေးပါ။